ကံ၊ညဏ်၊ဝိရိယ ဆိုတဲ့ လက်ပုံစံများ (သုတေသန) - YOYARLAY Digital Media and News
လက္ခဏာပညာရပ် ကိုလေ့လာတဲ့အခါ လူ့ဘဝ၊လူ့လောကရဲ့ ဖြစ်တည်နေတဲ့ သဘာဝတရားတွေကို အခြေခံပြီး လေ့လာရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို့လေ့လာတဲ့အခါ လူတစ်ယောက်အတွက် ဘဝအခြေခံတွေ ဖြစ်တဲ့ ကျန်းမာရေး၊စီးပွားရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ပညာရေး၊ ရာထူး၊ဂုဏ်၊မိသားစု ၊စတဲ့ အကြောင်းအရာတွေရဲ့ ဆိုးခြင်း၊ကောင်းခြင်း ဆိုတာတွေကို လေ့လာတဲ့အခါ အခြေခံအားဖြင့် ကြိုးကိုင်တဲ့သူတွေက ကံ၊ညဏ်၊ဝိရိယ ဆိုတဲ့သူတွေ ဖြစ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လက္ခဏာကို လေ့လာတဲ့အခါ ကံ၊ညဏ်၊ဝိရိယ ကိုလေ့လာရပါတယ်။ဒါကြောင့် လူတစ်ယောက်အတွက် ကံတရားကြီးစိုးတဲ့လက်ပုံစံ၊ ညဏ်ကြီးတဲ့သူရဲ့ လက်ပုံစံ၊ ဝိရိယသိပ်ကောင်းတဲ့သူရဲ့ လက်ပုံစံဆိုတာကို သေချာ သုတေသနပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ကံ၊ညဏ်၊ဝိရိယ အကြောင်းကို တစ်ခုချင်းစီခွဲပြီး ပြောပြချင်ပါတယ်။
ကံဆိုတဲ့အကြောင်းကို ပြောရရင် အလွန်ကျယ်ပါတယ်။ ကံတရားဆိုတာ တစ်ကယ်တော့ မြင်နိုင်တဲ့အရာ မဟုတ်ဘူး၊ ဒါကြောင့် “လှံထမ်းလာတာမြင်ရတယ် ကံထမ်းလာတာ မမြင်ရဘူး” လို့ ရှေးလူကြီးတွေ ပြောကြတာဖြစ်တယ်။ ကံကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်အဖို့ သူ့ဘဝမှာ သူ့အနေနဲ့ ဘာလုပ်လုပ် အဆင်ပြေနေတတ်တယ်။ ကံကလိုက်နေ တာဖြစ်တယ်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ သူ့အလိုလိုရောက်လာတတ်တယ်၊ထလုပ်ရင်လည်း အောင်မြင်ကြတယ်။ နောက်တစ်ခုက ထီပေါက်တာတို့၊ အမွှေရတာတို့ ၊ရွှေထုတ်ကောက်ရတာတို့၊ ကျောက်စီမ်းဖြတ်တာ အဆသောင်းချီ မြတ်တာ၊ စတဲ့ ကံတရားတွေရတယ်။ ညဏ်လည်းထုတ်မရ၊ ဝိရိယ စိုက်ထုတ်လည်း ဖြေရှင်းမရတဲ့ ကိစ္စတွေကို ကံကောင်းသူက ကိုင်လိုက်၊လုပ်လိုက်တဲ့အခါ အဆင်ပြေသွားတာလည်းရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ကံတရားရဲ့ အကြောင်းအရာ တွေကို သေချာသိနိုင်ဖို့ ကံဦးစားပေးတဲ့ လက္ခဏာရှင် ဆိုတာကို သေချာလေ့လာဖြစ်တာပါ။ ဒီလိုကံကောင်းနေ တဲ့သူဟာ အသက်ဘေးကလည်း သီသီလေးလွတ်တတ်တယ်။ ကံနဲ့ဆိုင်တဲ့ အလုပ်တွေမှာ အလွန်အောင်မြင်တာပါဘဲ။ ကျောက်တူးတာ၊ ရွှေတူးတာ၊ စတဲ့ ကံနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ တစ်ကယ်အထွဋ်အထိပ်ဖြစ်တဲ့ သူတွေရဲ့ လက်တွေကို လေ့လာတဲ့အခါ ကံဦးစားပေးလက်တွေဖြစ်တယ်။ ကံဆိုးစေတဲ့ အမှတ်အသားတွေပါတဲ့ ကံဦးစားပေးလက်ဖြစ်နေသလား ဆိုတာကိုလည်း ကြည့်ရပါသေးတယ်။
ညဏ်ပညာကို ဦးစားပေးတဲ့ လက္ခဏာရှင်ကြတော့လည်း သူ့ဘဝမှာ ကံသိပ်ကောင်းတာမဟုတ်လို့ ဖြစ်လာနိုးနိုးနဲ့ ထိုင်စောင့်နေရတာမျိုးဆိုရင်တော့ ညဏ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ လက္ခဏာရှင်အတွက် ရလဒ်ကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကံက ပြောသလောက်ကြီး သူ့ဘဝမှာမပေးဘူး၊ ထီဆုကြီးပေါက်ဖို့ဆိုတာက အစ ကံနဲ့ဆိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းမှာ အားနည်းတယ်။ ဒါပေမယ့် သူကညဏ်ရှိတဲ့သူ ညဏ်ပညာဦးစီးသူဖြစ်လို့ ကံတရားကို အခြေခံတဲ့ လောင်းကစားလိုအရာမျိုးမှာတောင် ညဏ်ကူပြီး လုပ်ဆောင်တတ်သူဖြစ်တယ်။ ညဏ်ပညာသမားအနေနဲ့ သူလိုချင်တာ ဖြစ်ချင်တာကို သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ညဏ်ပညာနဲ့ ဖြစ်နိုင်၊မဖြစ်နိုင်ကစပြီး သေချာစီမံကိန်းရေးဆွဲဆောင်ရွက်တတ်တယ်၊ တွက်တတ်ချက်တတ်မယ်၊ အခုလက်ရှိအခြေအနေကနေ နေက်ထပ် ကြီးပွားတိုးတက်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုအရာတွေ ရှောင်ပြီး ၊ဘယ်လိုအရာတွေ ဆောင်ရမယ် ဆိုတာကို သေချာ တွေးပြီးလုပ်ကိုင်တတ်လို့ တိုးတက်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ဒီလိုညဏ်သမားတွေက အုပ်ချုပ်သူကောင်းတွေ၊ စံမံခန့်ခွဲတဲ့သူတွေ၊ စတဲ့ ညဏ်ပညာနဲ့ထင်ရှားတဲ့ လူတန်းစားတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ သူရဲ့ အဓိက အားကောင်းလှတဲ့ ပညာညဏ်က အကောင်းဘက်သုံးမလား၊အဆိုးဘက်သုံးမလား၊ ပညာရှိသူတော်ကောင်း ဖြစ်မလား၊ ပညာရှိလူယုတ်မာဖြစ်မလားဆိုတာကတော့ သေချာလေ့လာရတဲ့ အချက်ပါ။
ဝိရိယ အားကောင်းတဲ့ လက္ခဏာရှင်တွေကတော့ သူတို့ဘဝမှာ ဘာလုပ်ငန်းကိုလုပ်လုပ် ဇွဲရှိတဲ့သူတွေ ဖြစ်ကြတယ် ၊ အလုပ်တစ်ခုကိုဘဲ ဇွဲနဲ့ ကြိုးစားပြီး အောက်ခြေကနေ အဆင့်မြင်တဲ့အခြေအနေအထိ တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ ဒီလိုလူတွေဟာ အပင်ပန်းလည်းခံကြပါတယ်။ ကံတရားကိုလည်း သိပ်ဂရုမစိုက်ကြဘူး၊ ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်ရတာဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်ကို ရင်မှာပိုက်ပြီး ကြိုးစားကြတဲ့သူတွေ ဖြစ်တယ်။ ညဏ်ကစားတာမျိုးတွေလည်း မလုပ်တတ်ကြဘူး၊ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူတို့က ရိုးသားကြတယ်၊ ကွေကွေကောက်ကောက်တွေစိတ်မဝင်စားဘူး၊ ရိုးရာဓလေ့နဲ့ ရှေးထုံးတွေကို သဘောကျတယ်၊ ဆန်းသစ်တီထွင်တာတွေ သိပ်စိတ်မဝင်စားဘူး၊ ဒါကြောင့် ဝိရိယသမားတွေကို ကျော်ကြားထင်ရှားသူတွေမှာ များစွာမတွေ့ရတတ်ဘူး၊ မရှိတာမဟုတ်ပါဘူး၊ အတွေ့နည်းတာဖြစ်တယ်။ ဒီလိုလူတွေ ရောဂါတစ်ခုခုဖြစ်ရင် အလွန်ဘဲ ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုလက်အမျိုးအစားမှာလည်း သူ့ရဲ့ ဝိရိယခွန်အားကို အကောင်းဘက်မှာ သုံးမလား၊ အဆိုးတွေကို ဖြစ်စေမလား ဆိုတာကို သေချာလေ့လာရတာဖြစ်တယ်။
အထက်က ဆိုခဲ့တဲ့ ကံ၊ညဏ်၊ဝိရိယ နဲ့ဆိုင်တဲ့ လက္ခဏာပုံစံတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး စုဆောင်းပြီး သုတေသနပြုနေတာပါ။ သုတေသနရလဒ်တွေကို သက်သေပြချက်တွေနဲ့ စနစ်တကျ သေချာလေ့လာထားပြီး ရလဒ်တွေကို စစ်ဆေးပြီး တိကျတဲ့ဟောကွက်တွေကို စီစစ်ကြည့်ပါတယ်။ လူ့ဘဝမှာ ကံအားကောင်းတဲ့ လက်ပိုင်ရှင်တစ် ယောက်မဟုတ်ဘဲ ကံနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေခဲ့ရင်တော့ ဒီလူရဲ့ ဘဝဟာ လူမှန် နေရာမှန်မရောက်နိုင် တော့ပါဘူး။ ဒီအခါမှာ သူ့ဘဝအခြေအနေကလည်း ဘာမှထူးမလာပါဘူး။ ဒီလိုဘဲ ညဏ်အားကောင်းတဲ့လက်ပုံစံ၊ ဝိရိယအားကောင်းတဲ့ လက်ပုံစံတွေကလည်း သူတို့နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းနဲ့ ပုံစံကျမှ လောကရဲ့ အထွဋ်အထိပ်ကို ရောက်ရတာဖြစ်တယ် ဆိုတာကို လေ့လာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လက္ခဏာပညာရဲ့ နက်ရှိုင်းတဲ့ အချက်တွေကတော့ ပြောကုန်နိုင်ဖွယ်မရှိပါဘူး။
**** မိတ်ဆွေ . .သင်က ကံဦးစားပေးတဲ့လက်လား၊ ညဏ်ပညာဦးစားပေးတဲ့လက်လား၊ ဒါမှမဟုတ် ဝိရိယကောင်းတဲ့ လက်ပုံစံလားဆိုတာ . . . .
Previous Previous post: မြန်မာကြက်တောင်မယ် သက်ထားသူဇာ ပူးတွဲတတိယဆုရရှိ
Next Next post: ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားတွေ ကျစ်လျစ်သန်မာအောင် ဘယ်နှစ်ကြိမ်ဒိုက်ထိုးကြမလဲ